यसरी बनेको थियो माओवादी केन्द्र - Ganatantra Online
अबिसेक डाँगी/काठमाडौं । प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्र अनेकौँ टुटफुटको शृंखलापछि अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको हो।
२०५२ सालदेखि सशस्त्र जनयुद्ध गरेको सो पार्टी ०६२/०६३ को जनआन्दोलमार्फत शान्ति प्रक्रियामा आएको हो। २०६५ सालमा एकता केन्द्र मसालसँग पार्टी एकतापछि एमाओवादी बन्यो।
मातृका यादवले पार्टी छाडेर नेकपा माओवादी बनाए। २०६९ सालमा एमाओवादीमा ठूलो विभाजन भयो। मोहन वैद्य, रामबहादुर थापा, विप्लव लगायत नेताले पार्टी विभाजन गरी नेकपा–माओवादी गठन गरे। वैद्यको पार्टीलाई पनि २०७१ मंसिरमा नेत्रविक्रम चन्दले फेरि विभाजन गराए।
२०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि १० गते डा. बाबुराम भट्टराईले एमाओवादी छोडेका थिए।
‘पार्टीहरु भनेका साधन हुन्, साध्य होइनन्। संघीय लोकतान्तिक गणतन्त्रामक राज्यव्यवस्था ल्याउनका निम्ति बनाएको पार्टीले एउटा कालखण्डको काम पुरा गर्‍यो,’ त्यसबेला भट्टराईले भनेका थिए, ‘अब नयाँ युगका निम्ति पुरानो पार्टीले पुग्दैन। नयाँ विचार, नयाँ कार्यदिशा, नयाँ संगठन, नयाँ नेतृत्व, नयाँ शैलीसहितको पार्टी निर्माण गरेर जानुपर्छ।’
२०७३ मा रामबहादुर थापा, मणि थापा, मातृका यादव पुनः फर्केर आएपछि नेकपा माओवादी केन्द्र बनाइएको हो।
२०७४ असोजमा चुनावी गठबन्धन गरेका एमाले र माओवादी केन्द्रले फागुनमा पार्टी नाम, राजनीतिक कार्यदिशालगायतका विषयमा सातबुँदे सहमति गरेका थिए। त्यसपछि ०७५ जेठ ३ मा पार्टी एकता गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने.क.पा.) बनाए।
एकतापछि ओली र प्रचण्ड दुई जना अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरेर तल्लो तहसम्मै ६०/४० को भागबण्डा भएको थियो। ओली र प्रचण्डबीच सरकार र पार्टी नेतृत्वको विषयमा समेत सहमति थियो। सोही आधारमा त्यसबेला आधा कार्यकालका लागि भनेर ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए।
२०७६ मंसिरमा ओली र प्रचण्डबीच अर्को सहमति गरियो। जसअनुसार ओलीले पाँचै वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने र प्रचण्डले पार्टीको नेतृत्व गर्ने निर्णय भयो।
२०७७ साल वैशाख ८ गते ओलीले पार्टीमा समेत थाहै नदिई दल विभाजनको व्यवस्था खुकुलो पार्ने अध्यादेश ल्याएपछि दुई पक्षबीचको विवाद चुलियो। प्रचण्डलाई वरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालले साथ दिए।
अदालतले नेकपा नाम ऋषि कट्टेललाई दिने फैसलासँगै एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अस्तित्वमा आएका छन्।